Mpifanaritaka • AoRaha
Haintsika ny manitatra. Tiantsika ny resabe. Lasa fomba fanaontsika ny mifampihantsy, hany ka diso lalana ilay tanjon’ny adihevitra any amin’ny farany. Dia izao toerana misy antsika izao no sahaza antsika, tahaka ny any antokantrano sy eo anivon’ny fiaraha-monina ary manenika ny firenena iray manontolo. Mandroso mankany amin’ny fihemorana.
Samia mahay maminavina ny antony, fa rehefa ny tambavy vita Malagasy no aroso dia mijoro ireo mpitsivalampandry ary mety hisy hiantso ny Afrikana koa ny sasany hiaro ny eny Anatirova atsy ho atsy. Inona moa no tsy hita teto, ankoatra ny lôjika sy ny rariny ary ny hitsiny?
Atao lohahevitra hanamasahana ny foto-pisaina efa hay tsianjery ny zava-misy isan’andro, na inona io na inona. Takona ny fahitsim-piheverana mety hitondra soa, na farafaharatsiny manolotra vahaolana. Miompana any amin’ny fananganana an’ilay sehatra lehibe antsoina hoe « Colisée » eny amin’ny lapan’i Manjakamiadana indray izao ny resabe any anaty tambajotran-tserasera any. Mifanjinja ao avokoa ny mpomba sy ny mpanohitra. Adihevitra sesilany ny fitehirizana ny vakoka sy ny tantaram-pirenena, ny maha fanjakana Merina taloha sy ny sisa… Miitatra kely amin’ny maha Malagasy. Fa maha Malagasy inona intsony?
Malagasy mifaneso, mifanenjika, mifampiampanga, mifamingana, mifanozona… sisa no hampandovaina ny taranaka fara aman-dimby! Ny vakoka ara-pomba fisaina sy fiaina naha isika antsika aza very sy nariana ary iniana hadinoina tanteraka, dia ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Sehatra iray tsy nitadiavana ny « fanomezana kely avy tamin’iza na iza, tahaka ilay nanaovana antso avo ho fanamboarana ny Rova », nefa tsy nety voatahiry intsony. Tany anie no efa natao zinona izany vakoka izany e!
Asa re fa tsy manakana amin’ny fanehoan-kevitra na ny safidy manoloana ny tranga iray azo tsapain-tanana toa an’ity resabe momba ny eny Anatirova ity izany saingy ambany maso kokoa, ary zava-dehibe lavitra satria nampirindra ny fiaraha-monina fahiny. Fa isika koa moa nivadika ho vahoaka tia mifanaritaka foana…
Indray mandeha tsy miverina